कुन राशिको मानिसले कसरी लक्ष्मीको पूजा गर्ने ? - IAUA
कुन राशिको मानिसले कसरी लक्ष्मीको पूजा गर्ने ?
ramkrishna November 23, 2016	कुन राशिको मानिसले कसरी लक्ष्मीको पूजा गर्ने ?
आज घरको आँगन, पिँढी, दलान, कोटा गाईको गोबरले लिपेर सफा बनाइ । घरका झ्याल ढोका साथै पानी सार्न प्रयो गर्ने गाग्री लोटामा फूलका माला लगाएर सिगार्ने गरिन्छ ।आज साँझ घरको सरसफाई गरी मुलढोकादेखि पूजा कोठासम्म चालको पिठोबाट लक्ष्मीको प्रतिकात्मक पाइला बनाएर झिलिमिली बत्ती बालेर लक्ष्मीको स्वागत गरिन्छ । अँध्यारोमा लक्ष्मीको बास नहुने मान्यताअनुसार घरघरमा दीपावली गरिन्छ । दीपावलीपछि घरको पूजा कोठामा आफूसँग भएका सुन चाँदीका गरगहना, नगद तथा फलफूल राखेर धनकी देवी लक्ष्मीको धुमधाम पूजाअर्चना गरिन्छ ।
– लक्ष्मी पूजाको राती रातो चन्दन, केशरी मिसाएर सेतो कपडा आफ्नो दराजमा बिछ्याउनाले समृद्धीमा सधै बृद्धी हुन्छ र आकस्मिक धनहानीको सम्भावना पनि कम हन्छ ।
– लक्ष्मी पूजाको दिन साँझमा घरको मुख्य ढोकामा तेलको ज्योति बाल्ने गर्नुपर्छ । यसले वर्षभरी आर्थिक कठिनाईको सामना गर्नु नपर्ने तथा रोकिएको धन पनि चाँडै नै प्राप्त हुन्छ ।
– यदी तपाई धनको कमीबाट जुधीरहनु भएको छ भने लक्ष्मी पूजाको रातमा लक्ष्मी(गणेशको पूजा गर्दै दक्षिणवर्ती शंखको पूजा गरेर त्यसलाई आफ्नो धन स्थान अर्थात् दराजमा राख्ने । यसले तपाईको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन सक्छ ।
– लक्ष्मी पूजाको राती घरको मुख्य ढोकामा गाइको घ्यूले भिजाएर ज्योती बाल्नुपर्छ । यदी त्यो ज्योती बिहानसम्म बलिरहे तपाईको आर्थिक अवस्थामा सुधार आऊँछ साथै मान(सम्मान पनि बढ्नेछ ।
– वृश्चिक राशिका मानिसले लक्ष्मी पूजाको राती तुलसी या स्फटिकको मालासँगै यो मन्त्रको जप गर्नुपर्छ । मन्त्र ऊं ऐं क्लीं सौस
– धनु राशिका मानिसले लक्ष्मी पूजाको राती तुलसी या स्फटिकको मालासँगै यो मन्त्रको जप गर्नुपर्छ । मन्त्र ऊं ह्रीं क्लीं सौस
Previous Previous post: निहुरिएर मोबाइल चलाउने बानि छ ? सावधान !
Next Next post: धन, इज्जत र स्वास्थ्यका लागि लगाउनुस् यस्ता रूद्राक्ष